नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ -मन्त्रि इन्द्र बहादुर आङबो “मौसम” « Phidim Today
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ -मन्त्रि इन्द्र बहादुर आङबो “मौसम”
Published on: 19 January, 2019 2:46 am
टुडे संवाददाता /पाँचथर, ०५ माघ
सविधान कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको कार्यान्वयन भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वपाएपछि प्रदेशले विभिन्न कामहरु अगाडी बढाएको पाईन्छ । विकास बजेट उत्साहपूर्वक खर्च नभएको आलोचना पनि भईरहेको छ । प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन भईरहेको छ, योजनाहरु कस्ता छन् ? कहिले टुङ्गीएला प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी ? यि सन्दर्भमा १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रि इन्द्र बहादुर आङबो “मौसम” सँग फिदिम टुडेका सम्पादक गिरिराज बाँस्कोटाले गरेको कुराकानी ः
इन्द्र बहादुर आङ्बो
प्रदेश सरकारले राजनीतिक नेतृत्व पाएको एक बर्ष पुग्न लागेको छ । यहाँसम्म आईपुग्दा के के कामहरु भए र के के काम बाँकी रहेका छन ?
हामीले संविधान निर्माण भईसके पछाडी संविधानले प्रावधान गरे अनुसार तीन तहको निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको झण्डै दश महिन पुरा भएको छ । र यो अवधिमा निक्कै आरोह अवरोका विच प्रदेश सरकार अघाढी बढिरहेको छ । मुख्य दायित्वभनेको संविधानको कार्यन्वयन गर्नु नै हो । किनभने लामो समयदेखि संर्घष गरेर संविधान निर्माण भएको हो । अहिले तीन तहको सरकालाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । हिजो अरु सरकारहरु कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालनमा थिए । संघिय सरकार लामो समयदेखि आफ्नै सरचनामा थियो, स्थानिय सरकारको कुनै न कुनै रुपमा अभ्यासमा थियो । प्रदेश सरकार नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो । हामिले सकुल र गुन्द्रीमा बसेर प्रदेश सरकारको सुरुवात गर्यो । हामि नितान्त प्रारम्भीक चरणमा काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले कम्तीमा प्रदेश सरकारले सरकारको स्वरुपग्रहण गरेको छ । संबिधानले दिएको अधिकारहरु भित्र बसेर प्रदेशभित्रको विकास निर्माणको काम, जनताको सरोकारका विषयबस्तुलाई केन्द्रीत गर्न ल्याइएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।
उसो भए १ नम्बर प्रदेश अब चै व्यस्थीत भएर काम मा अघि बढ्यो ?
विश्वकै नयाँ मोडेलको संघियता हाम्रो छ । पहिला अभ्यास गरीएको मोडेल हैन । त्यसैले यसको कार्यान्वयन आफैमा जटिल हुन्छ । संविधान कार्यनयन एउटा क्षणिक अवधिमा हुने होईन, यसले निश्चित समय लिन्छ । प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा व्यवस्थीत भइसक्यो भन्ने पक्षमा म छैन । थुप्रै पक्ष बाँकि छन् । अहिले सरकारको रुप ग्रहण गरेर घोषित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छ ।
प्रदेशले कहिले सम्ममा स्थाहि राजधानी तोक्ला, प्रदेशको नाम राख्ला ?
सामाजिक सन्जाल तथा मिडियामा भइको टिप्पणी भएको म यसलाई सम्मान गर्छु । तर यसका केहि ऐतिहासि पृष्टभुमि नबुझि हल्का टिप्पणी रुपबाट पनि मैले लिएको छु । पहिलो संविधान संविधान बर्ष सम्म रहयो तर प्रदेशको संख्या र नामाकरण टुङगाउन नसकेर विगठन भयो । फेरी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो जहाँ सवै शिर्ष नेताहरु सविधान सभामा आउनु भयो । उहाँहरुले प्रयत्न गर्दा दुई बर्षमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन सक्नु भएर प्रदेश सभालाई जिम्मा दिईयो । तेतिधेरै असाधारण र गहन विषयबस्तु प्रदेशसभा बन्ने वित्तिकै जाधुको क्षणी झै टुङ्गीन्छ भनेर कल्पना गर्नु सहि र सत्य हुदैन । छलफलमै छौँ । यो प्रदेशको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको विषय हो । माघ २० गते बाट हिउँदे अधिवेशन बोलाएका छौँ । गहन छलफल र उच्च सहमतिका आधारमा यो टुङ्गीन्छ भन्ने विश्वास हामिले लिएका छौँ
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउने काम पनि गर्न सकेन भन्ने आलेचना हुन थालेका छ नी ?
प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कानुन निर्माणगर्ने कुरा र प्राप्त स्रोत, साधनलाई वजेट निर्माण गरेर विकास निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले पहल कदमि सुरुवात देखिनै लिएको छ । संविधानले छुट्याएको एकल क्षेत्राधिकार भित्रको मोटामोटि कानुन बनाई सकेका छौँ । साझा सूचिका कानुन निर्माण गर्न बाँकि छ । संघले निर्माण गरेपछि प्रदेशले र प्रदेशले निर्माण गरेपछि स्थानिय सरकार कानुन बनाउने प्रवाधान छ । सबै संघिय कानुन आइनसकेकाले केहि कानुन बनाउन बाँकि छ । हामिलाई तत्काल आवश्यक हुने कानुन निर्माणमा कुनै कठिनाई छैन ।
१ नम्बर प्रदेशले निर्धारण गरेका मुख्य मुख्य लक्ष के के हुन ?
यो सरकार पहिलो सरकार हो । यो सरकारको पहिलो दायित्व संविधान कार्यान्वयन हो ।यसको मुख्य दायित्व संघिय सरकारको हो । तीनै तहको सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने काम जिम्मा संघिय सरकारकै हो । हामि कसरी अगाडी बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिलो सरकार भएकाले धेरै कुरा संघिय सरकारसँग निर्भर हुन्छ । सबै कुरा समयमा हस्तान्तरण भयो भने गती छिटो हुन्छ, ढिला भयो भने ढिला हुन्छ । प्रदेश सरकारले ‘सबैभन्दा बेस, एक नम्बर प्रदेश’ मुल नारा अगाडी सारेका छौँ । हामिलाई के विश्वास छ भने नेपालकै अन्य प्रदेशभन्दा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशको रुपमा हाम्रो प्रदेश रहेको छ । कृषिमा प्राथमिकता, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा उत्पादनमा जोड दिदा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अहिलको तथ्याङक हेर्दा निर्यातको ४० प्रतिशत एक नम्बर प्रदेशबाट हुन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा, आयतलाई विस्तापित गर्ने कुरामा ध्यान दिएर आधुनीक कृषि प्रणालीमा विकास गर्ने, स्वोरोजगार सृजना गर्ने भएकाले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । कृषिमा थुप्रै अनुदान र प्रवद्र्धनगर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । अर्को सम्भावना को क्षेत्र पर्यटन हो । चालु आर्थिक बर्षमा सबै क्षेत्रलाई समेटेका थियौ । पर्यटन सम्बन्धी कानुन बनाउने तथा पर्यटन बोर्ड गठन गर्दै छौँ । पर्यटकिय सक्रिट बनाउने, पर्यटकलाई टिकाउने काममा जोड दिने छौँ । यसका साथै भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेका छौँ । बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा हामिले लगानी गरेका छौँ । समृद्धिको महत्पूर्ण जग बसाउने सुरुवात गरेका छौँ ।
चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना सकिएको छ विकास बजेट उत्साहित रुपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
यो कुरा कुरा सत्य हो । यो विषयमा हामी पनि गम्भीर रहेका छांै । तर प्रदेशवासि आतिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । संघिय सरकार लामो समयसम्म निरन्तर लामो बजेटको अभ्यास भएको र तथा तलसम्म आफ्नै सरचना भएको सरकारको कुल पुजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र छ । स्थानिय सरकार बल्ल सम्झौता गरेर बल्ल पुजीगत खर्च गर्न थालेका छन । आफ्नै सयन्त्र नभएको प्रदेश सरकारको पुजीँगत खर्च कतिभयो भनेर प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन । बल्ल पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाईहरु स्थापना भएका छन् । पुजीँगत खर्चको सुरुवात भएको छ । मलाई विश्वास छ बाँकि छ महिनामा प्रदेशको बजेट उत्साहप्रद रुपमा खर्च हुने छ । बाँकि ६ महिनामा बजेट कार्यान्वय हुन्छ ।
तीनै सरकारको बजेट कार्यान्वयमा उस्तै किसिमको समस्या देखियो । अब कसरी समृद्धि हुन्छ ?
यस्तो हुदा केहि नितिगत कुरा सुधारलाइ सोच्नु पर्छ । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । संघिय सरकारलाई, स्थानिय सरकारलाई कुनै अड्काउ थिएन । नेपालको अर्थतन्त्र निक्कै बुझेका अर्थमन्त्रि हुदापनि पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन ? यसको मुख्य बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन हो । संघिय सरकारले खरिद ऐन संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जिल्लामा आर्कषक बजेट प्रदेशको छ । हिजोको काम गर्ने शैलि हेर्दा बजेट सफल रुपमा कार्यान्वन गर्नकालागि अनुगमन सयन्त्र कस्तो छ ?
प्रदेशबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयन को चरणमा छ । यो पाँचरका जनताको पुँजी र सम्पत्ती हो । यसको कार्यान्वयनको दायित्व पाँचथरका जनताको को दायित्व हो ।यसको पारदर्शी र व्यहारीक कार्यान्वयनकालागि आव्हान गर्दछु । यो कुनै एउटा आमुक राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम हैन । विकास र समृद्धिमा हामि साझेदार हौ । हिजो केन्द्रीय सरकार सिंहदारबारमा केन्द्रीत थियो । अहिले नजिकबाट अनुगमन गर्ने, पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सबैले जोड पु¥याउनु पर्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट ससदिय समितिबाट अनुगमनको काम गर्छौ । जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउछौँ । सहि रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा जवाफदेहिताका लागि प्रदेशले भुमिका निर्वाह गर्छ ।
अन्त्यमा, हाम्रा पाठकहरुलाई भन्नु पर्ने महत्पूर्ण विषयहरु केहि छन् ?
विधि को शासन र व्यवस्थामा म विश्वास राख्छु । आज म अर्थमन्त्री छु, मेरोपालमा सबै चिज हुन्छ र भएको छ भन्ने कुरा म ठान्दीन । अहिलेको व्यवस्था स्थापनाकालागि हिजोको नेतृत्वको महत्पूर्ण भुमिका रहयो । हिजो अस्थीरता र राजनीतिक लडाईका कारण विकास हुन सकेन । अहिले देश विकास र समृद्धिको यात्रामा छ । प्रचुर सम्भावना देखापरेका छन् । त्यसखालका बजेट र कार्यक्रमहरु अभिव्यक्त भएका छन् । अब समृद्धिको यात्राका लागि पनि हिजो संविधान प्राप्तिकालागि दलहरुको एकता थियो त्यस्तै एकता आवश्यक छ । विकास निर्माण र समृद्धिमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष नभनि मिलेर काम गर्नु पर्छ । पाँचथरको सन्दर्भमा थुप्रै बजेट र कार्यक्रम आएका छन् । पाँच बर्षभित्र पाँचथरको काचुली फेर्ने सपना छ । त्यो मैले अवधारणा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रभुत्व बर्गकोअगाडी राखेको छु । उहाँहरुको सहयोगमा पाँच बर्षमा पाँचथरको जनताको आर्थिक जिवनस्तर र भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक फड्को मार्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।